Mara Mara Airedale Terrier - Dịrị
Mara Mara Airedale Terrier
Nnọọ, onye nkịta hụrụ gị n'anya! Ọ ga-amasị anyị ka ị zute Eze nke Terriers, na Airedale Terrier.
Nke mara mma, nwee obi ike, nwee obi ike, nwee ọgụgụ isi, na-apụ apụ, ma nwee isi iberibe - gịnị ọzọ ka ị ga-arịọ maka anụ ụlọ, nri?
Mana ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta ma ọ bụ ịnakwere Airedale, ị ga-amụta ihe niile gbasara njirimara ya, mkpa ya, na n'ezie, quirks ya.
Ka anyị chọpụta ma ọ bụrụ na nke a bụ ezigbo ụjọ maka gị!
Mmalite: Gini ka Airedale Terriers mara?
Kedu ihe Airedale Terrier dị ka?
Obi ojoo: Ndi Airedales bu ezigbo nkita ezinulo?
Ilekọta gị Airedale Terrier
Ahụike Airedale Terrier
Ego ole ka Airedale Terrier Puppy Cost?
Iouschọ ịmata ihe Airedale Terrier Mixes?
Nka nkịta nkịta a dabara gị?
Ejiri Airedale site na ịzụlite a Onye Welsh Terrier ( Nwa na Tan Terrier ) , ihe Otterhound , n'ime Great Britain . Ebumnuche ya bụ ịmepụta nkịta nwere ike ịchụ nta obere anụmanụ na nnukwu egwuregwu mgbe a zụrụ ya nke ọma.
Fọdụ ndị mmadụ nwekwara ike ịchọpụta njirimara nke ma Terrier nke Irish na Bedlington Terrier na Airedale.
Airedales enyekwara aka na udiri anumanu ndi ozo, dika Yorkshire Terrier . N'ime afọ iri na abụọ nke ịzụlite azụlite, ha ghọrọ ndị ama ama maka egwuregwu.
Nkịta mbụ gosipụtara na Ndagwurugwu Aire mere na 1864, ebe ndị ikpe kwuru na ụdị ahụ dị mma. N'oge a, ndị gbanwere aha ha ọzọ ndị Airedale Terrier , ọ bụ ezie na nke a ghọrọ naanị ọrụ na 1886.
N'oge Narị afọ nke 19 , Osimiri Aire kwadoro ọtụtụ nkịta na-egosi dị ka ebe mgbakọ. Ihe ngosi a choro udiri Terrier ka o soro oke site na mmiri wee gbuo mmadu, na-eme ka ndi mmadu nwee udiri udiri.
Na 1900, na Airedale Terrier Club nke America tọrọ ntọala. Ha bidoro iko nke a kpọrọ Airedale Bowl, nke na-egosipụta aha ndị enyere onyinye kacha mma.
Warmen jiri Airedales banye Agha Iwa Mbụ dika nkịta nche , nkịta na-eche nche , na na-ebu agha . Ndị mmadụ na-ejikwa ha maka ya ịzụ anụ , dị ka weghachite , na-arụ ọrụ nkịta , ịchụ nta , na nkịta ndị uwe ojii .
Warren Harding na Calvin Coolidge bụkwa ndị nwe na Fans nke ụdị. N’afọ 1949, ndị American Kennel Club ( AKC ) họọrọ ndị Airedale Terrier 20 na-ewu ewu, ọ bụ ezie na nke a ebelatala.
Nke a bụ ụdị kachasị ukwuu nke ndị na-atụ ụjọ; ọ bụ ya mere, dị ka anyị kwuru na mbụ, ndị mmadụ na-akpọkarị ụdị Eze nke ndị ụjọ . A na-akpọkwa ha mgbe ụfọdụ Uche Ogbuagu ma ọ bụ Ndị Na-ebugharị Mmiri .
Onye Airedale Terrier ‘S isi ya dị ogologo ma dịkwa larịị site na okpokoro isi ya na imi oji. Ntị ha na-agbada n'akụkụ, ha nwere obere anya-acha oji.
Olu ha na-asọba n'azụ ha dị mkpụmkpụ, ubu ubu ha dịkwa mbadamba. Ha nwere ogologo akwara, nke nwere mọzụlụ, nke dịkwa ka akụkụ ahụ ha niile.
Obi ha dị ogologo ma ọ bụghị sara mbara ma ọ nwere ike ịnwe oge na-acha ọcha. Ndị a cuties nwere obere ụkwụ, na ajị anụ ha bụ wired na ubé wavy.
Otu ọdụ ọdụ Airedale dị ogologo ma sie ike, ma ndị mmadụ anaghị etinye ha dị ka ọdịnala, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-eme mgbe ha bụ ụmụ nkịta.
Na American Kennel Club na-ekwu na-egosi ọdụ nke nkịta agaghị agbakọta n'azụ ha, sie ike, ma bụrụ ogologo oge.
Ọ bụ ezie na ịkụchi iwu na-akwadoghị na mba ụfọdụ na-enweghị ezigbo ihe kpatara ya, ndị si mba ọzọ ka na-eme ya.
Size: Kedu otu nnukwu Airedale Terrier si enweta?
Airedale Terriers nwere elu nke 21 ruo 23 sentimita asatọ (53 ka 58 cm) n'ubu ma nwee ike iru ibu 70 pound (32 n'arọ) Mamụ nwanyị dị ntakịrị karịa ma ha dị kilogram iri anọ ruo iri ise na ise (iri na asatọ ruo iri abụọ na ise).
Ndị ọzọ karịa iche echiche banyere nha ha, ị ga-atụlekwa ọkwa ọrụ nke ìgwè a. Na nke ahụ kwuru, Airedales abụghị ezigbo anụ ụlọ maka ndị bi n'ụlọ.
Anyị na-akwado ha ka ha gaa saa mbara ụlọ nwere nnukwu ogige nke nwere ogige dị ogologo, nke nwere nchebe .
Na-eche ma enwere obere Airedale Terrier? Onweghi onye, ​​ma ị nwere ike ịga maka kọmpụta ndị ọzọ dị ka nke Welsh Terrier . Ha dị ka Airedales mana pere mpe ma pere mpe ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Uwe Airedale na agba
Uwe Airedale bụ ma oji ma ọ bụ grizzle tan na-eti, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-abụ tan. Ha n'ozuzu nwere oji ma obu grizzle ịmachi n'azụ ha ma tanye ha n'ụkwụ, n'obi, afọ, na n'isi.
Grizzle na-ezo aka agwakọta nke ojii na ọcha ma ọ bụ isi awọ. Airedales nwere a Uwe mkpuchi abụọ , na aji dị nro na kootu na ogologo ntutu ntutu dị ka topcoat.
Uwe elu ha na-adịkarị okirikiri, ebe mkpuchi ha dị mkpụmkpụ ma dịkwa nro. Uwe a na-eme ka ụdị a dị obere, yabụ na ị ga-ehicha ha oge niile ma dozie ha oge ụfọdụ.
Ntutu ntutu Airedale ekwesighi idi ogologo dika o kwesiri idina ala ma di nso na aru ha.
Nke a nkịta nwere ọgụgụ isi dị mma na ụmụaka, ọ bụ ezie na ogo ha na ọ excụ ha nwere ike ịbụ nke ụmụaka dị obere. Childrenmụaka abụọ na nkịta kwesịrị ịnata ọzụzụ kwesịrị ekwesị n'oge ka ha wee nwee ezigbo nkekọ.
Ndi nne na nna kwesiri ileba anya na mmekorita. Ndị a cuties nwere ike ịbụ ihe nchebe nke ndị òtù ezinụlọ , nke na-eme ha ezigbo nkịta na-eche nche.
Dị ka ụmụ aka nwere mmụọ siri ike, ha nwere ike ghara igosipụta ịhụnanya ha site n'ịchịkọta onwe ha kama ọ na-atọ ha ụtọ ịnọnyere ndị ha. Otu Airedale na-eme nke ọma ezinụlọ ahụrụ n'anya jiri oke ịhụnanya.
Ka anya ha na-adịwanye, ha nwere ike ha agaghị ebili ihe ọjọ. Airedales nwekwara ike iso anụ ụlọ ndị ọzọ na-emekọ ihe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha tolitere ọnụ.
Mgbakwunye site na nwata bu ezi echiche iji gbochie ha ịchụ ma ọ bụ ịchụ nta ụmụ anụmanụ ndị ọzọ.
Ha bụ nkịta nọọrọ onwe ha, na-achụ nta na-enweghị ntụziaka, ọ ga-abụ na ha na-achụ obere ụmụ anụmanụ ndị a na-ewere dị ka anụ oriri.
Airedales bụkwa ezigbo ndị ọzụzụ atụrụ, ọ bụ ezie na ị kwesịrị inye ọzụzụ kwesịrị ekwesị; ma ọ́ bụghị ya, ha nwere ike ịkpasu ụmụ anụmanụ ka ibu iwe.
Ka ndị mmadụ na-azụ Airedales ịchụ nta ma jiri ha mee ihe ngosi iji chụọ oke mmiri, ha bụ ezigbo ndị na-egwu mmiri, ha na-enwekwa igwu mmiri.
Ikwesighi ịhapụ ha naanị ruo ogologo oge, n'ihi na nke a nwere ike iduga nhụjuanya na omume mbibi. Ha chọrọ mmega ahụ oge niile iji wepu ike ha gabigara ókè.
Otu ijegharị n’ụbọchị nwere ike zuru ezu, mana anyị na-akwado abụọ, yana ọtụtụ ohere n’ubi ma ọ bụ n’ogige maka igwu egwu. I nwekwara ike inye ha ihe egwuregwu dị iche iche na-akpali akpali iji mee ka ha nọrọ n'ọrụ mgbe ị na-anọghị.
Ndị na-eburu ọnụ bụ otu ìgwè n'ozuzu ha. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ndị mmadụ na-azụ Airedales maka ịchụ nta, ya mere ha na-agbasi mbọ ike na ihe ha chere dị ka anụ oriri ma ọ bụ iyi egwu.
Ọzụzụ nrube-isi na ịkpakọrịta nwere ike inye aka na nke a, ebe ha na-amụta ịgbaso iwu ndị na-eduga ha na anụmanụ ndị ha tụụrụ nri.
Ga ụlọ akwụkwọ ọzụzụ na nwa gị bụ ihe dị mkpa, n'ihi na ha nwere ike ịbụ ihe ịma aka mgbe ụfọdụ.
N'ihi ọgụgụ isi na ịhụnanya ha, ịzụ nkịta gị nwere ike ịdị mfe, ọ bụ ezie na ị kwesịrị ịdị iche iche ọzụzụ iji zere ịgwụ ha.
Inye nwatakiri ọzụzụ ọ bụla nwere ike isiri gị ike; agbanyeghị, na-eso usoro ndị a dị mfe nwere ike inyere gị aka. Buru n'uche na nkịta ndị a nwere ike ibu iwe n'obi ma bụrụ ndị na-eme ihe ike ma ọ bụrụ na ị mesoo ha n'ụzọ obi ọjọọ.
Anyị na-akwado ihe ndị a ọzụzụ pad iji n'ime.
Otu Airedale si kootu na-achọ obere mmezi, ọ bụ ezie na anyị na-akwado izu kwa izu na iji ejiji oge ụfọdụ.
Ihicha nkịta gị kwa izu na-ewepu nwụrụ anwụ ntutu nke a na-ewekarị na-achọkarị nhicha nke ụlọ gị.
Nwere ike ịmụta iji edozi nkịta gị n'onwe gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịchọta ama nwa nwoke imere gị ọrụ ahụ.
Nwa gị ga-ahọrọ ihu igwe dị ọkụ n'ihi uwe mwụda ha; anyị na-akwado ịhapụ ha n'ime n'oge ọnwa oyi nke afọ.
Lọ ụlọ ndozi nwere ike ịbụ ezigbo ego ma ọ bụrụ na ịhapụ ha n'èzí mgbe ị na-anọghị n'ụlọ.
Kwesighi ịsa ahụ gị anya mgbe niile, mana ọ bụ ezi echiche ịsacha ha ugboro atọ ma ọ bụ anọ kwa afọ iji mee ka ha na-ele anya.
Gbalia ihu inye nwa gi ihe egwuru-egwu na-adịgide adịgide oge ị na-anọghị ya ka ọ ghara ịgwụ gị ike.
Lelee ntị pup gị mgbe niile maka ịcha ọbara ọbara ma ọ bụ isi; ọ bụrụ na otu n'ime ndị a dị, ọ kachasị mma ịkpọrọ ha na vet maka ọgwụgwọ.
Na-emega Airedale Terrier
Airedales nwere elu ike ike na-achọ a agafeghị oke ego nke mmega. Ha na-emekọ nnukwu egwuregwu, ha ga-agakarịkwa gị ike.
Ha na-eto eto n'obi ha ma na-egwuri egwu mgbe niile. Youkwesịrị ịkwadebe onwe gị iji oge 40 ruo 60 nọrọ na nwa gị kwa ụbọchị iji kpochapụ ike ha.
Gba akwụkwọ: Airedale Terriers bụ hypoallergenic?
Dịka anyị kwurula na mbụ, ịchọ mma ekwesịghị ịdị kwa oge, kama ọ ga - eme ka nwa gị mara mma mara ihe. Ọ bụrụ na ịnwee ezigbo ngwaọrụ na ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi, ịnwere ike ịme nkịta gị aka.
Cheta na nwa nkita gi ga enwe obi uto na nleghari anya ma oburu na inye umuaka ihe oma site na nwata.
Ndị a cuties nwere uwe hypoallergenic ma ghara ịwụsa ọtụtụ, ya mere mmadụ ole na ole na-ahụ mgbaàmà nfụkasị mgbe ha na ha bi.
Ntutu ha nwere ike ịtinye obere ma ọ bụrụ na ọ toro ogologo, mana ị nwere ike iji mgbo iji kpughee ha n'oge brush kwa izu gị. Ha nwere ụdị nkịta na-ahụkarị n'ihi mmanụ dị na akpụkpọ ahụ ha, mana ọ bụ ihe ị ga-eji.
Na-eri nri gị Airedale Terrier
Kwesiri inye nkịta nri nri kwesịrị ekwesị dịka ogo akwadoro maka afọ na ogo ha. Kwesịrị ịtụle a elu-edu nri nkịta ma ọ bụ nri nri akụrụngwa site na nnabata gị.
Lelee ọkwa dị arọ ha, ọkachasị n'oge ọzụzụ, ebe ọ bụ na ịnwe calorie nwere ike iduga oke ibu .
Ikwesiri imuta banyere nri ndi mmadu nwere ike ichoputa ka nwa gi rie na ndi nke anaghi enye ha ihe obula site na efere gi.
Cheta, mgbe pup gị dị obere, o kwesiri iri nri puppy ma gafere na nri ndị okenye mgbe ọ mere okenye. Nkịta gị kwesịrị ịnweta mmiri dị mma n’oge niile.
Otu nkịta toro eto ga-eri ihe dị ka iko atọ nke iko otu ụbọchị, agbanyeghị na ị kwesịrị ịrapara n'ibu arọ akwadoro na ngwugwu nri.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị na-azụ nwa gị nri ugboro abụọ n'ụbọchị karịa ịhapụ nri ahụ n'ụbọchị. Nke a ga - enyere ha aka iri nri kwesịrị ekwesị ma dozie ya, ka agụụ ghara ịgụ ha ma emechaa n’ụbọchị ahụ.
Can nwere ike mmefu ego gburugburu $ 68 maka nri na otu ọnwa kwa Airedale Terrier. Nri ị họọrọ dị n'aka gị, ọ bụ ezie na onye vet kwesịrị ịkwado ya iji hụ na ọ dị mma maka nkịta gị.
Ọ bụ ezie na nkịta a dabara adaba na-adịkarị mma, ha nwere obere obere nsogbu ahụike ilezi anya. Imirikiti ndị na-azụ ihe nwere ike inye mwepụ ahụike na-egosi nsonaazụ nke nyocha emere na nkịta maka ọnọdụ ndị a.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịlele ndị a site na weebụsaịtị Orthopedic Foundation maka Animal.
Nchegbu Ahụ Ike
Hip Dysplasia : Hip dysplasia bụ ihe nketa a na-ahụkarị na nkịta buru ibu, ọ bụ ezie obere obere ụdị nwekwara ike inweta ya. Ọ na - apụta mgbe ọkpụkpụ úkwù na apata ụkwụ adịghị amị amị kama ọ na - ete ibe ya aka. Obi dị m ụtọ na enwere ike ịgwọ ọrịa a na mgbakwunye, ọ bụ ezie na nnukwu dysplasia hip nwere ike ịkpata ịwa ahụ dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ n’ịchọpụta mbelata nke ọrụ ma ọ bụ usoro mmegharị dị iche iche, ị nwere ike ịga leta vet gị maka nyocha.
Nwa gị nwere ike ịmegharị úkwù ya, nwee ụfọdụ ihe mgbu ma ọ bụ nkwesi olu ike, ma oge ụfọdụ ọ ga-abụkwa ngwọrọ na ngwụcha azụ ya. May nwekwara ike ịchọpụta mmụba nke akwara ubu na nkwonkwo akwara apata.
Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ọnọdụ a site na American Kennel Club .
Dermatitis: May nwere ike ọ gaghị achọpụta dermatitis na pup gị ruo mgbe ọ malitere ịta ya, ọ na-aghọ ọkụ, ọkọ, ma ọ bụ raw. Nwere ike ịgwọ ya na isi mmanụ site na vet gị ma ọ bụ ncha ntutu dị iche maka ịsa ahụ.
Nfụkasị ahụ: Nfụkasị ahụ nwere ike ibute ọrịa dermatitis mgbe ụfọdụ. Nwa nkịta gị nwere ike ịbụ ihe nfụkasị na nri ma ọ bụ ihe ọ bụla na gburugburu ebe obibi ha na-akpọtụrụ ma ọ bụ na-ekuru.
Onye na-elekọta gị nwere ike ịkọwa ọgwụ, nri dị iche iche, yana mgbe ụfọdụ CBD mmanụ iji gwọọ mmekpa ahụ gburugburu ebe obibi.
Onye na-elekọta gị nwere ike ịkwado ụzọ kachasị mma iji were iji gbochie mmejọ ahụ. Buru n’uche; ị nwere ike ịgbanwe gburugburu pup gị.
Thyroid Nsogbu: Anaghị egosipụta thyroid nwere ike gosipụta onwe ya site na ọnọdụ ndị ọzọ dịka ntutu isi, uru ibu, akwụkwụ, ịda mmụọ, ma ọ bụ ọnọdụ anụ ahụ. VET gị ga-achọpụta hypothyroidism site na ime nnwale ụfọdụ ma tọọ ọgwụ maka nwa nkita gị.
Ọ nwere ike na-a medicationụ ọgwụ a ná ndụ ya niile, ọ bụ ezie na usoro onwere ike ịgbanwe. Onye na-elekọta gị ga-anwale ịkwa akwa thyroid gị kwa afọ dịka ọgwụ ahụ nwere ike ịdị mkpa ịgbanwe ya.
Ihe na-eme ka thyroid na-arụ ọrụ ga-ebute hyperthyroidism, nke nwere ike ibute kansa.
Ọ bụ ezie na nke a dị njọ karị, ụmụ anụmanụ nwere ike ịgwọ ya. AKC na-enye ozi ndị ọzọ n'ihe banyere ọgwụgwọ hyperthyroidism.
Na-aga n'ihu Retinal Atrophy: Ọnọdụ a ga-emetụta ọhụụ nke nkịta gị. Ọ nwere ike ịmalite site na ìsì abalị ma mee ka ọ kpuo ìsì. Imirikiti nkịta nwere ike ibi na ọnọdụ a, ọ bụrụhaala na gburugburu ha na-adịgide adịgide. N'ụzọ dị mwute, ha enweghị ike ịgwọ ọnọdụ a, ọ bụ ezie na ndị na-azụ ya nwere ike ịnwale ya tupu ị gaa n'ihu akara.
Eriri nwa Hernia: Ọnọdụ a na-egosi onwe ya dị ka akpụ n'akụkụ umbilicus nkịta. Ọ bụrụ na o pere mpe, ọ nwere ike imechi oge na achọghị ọgwụgwọ. Mgbe ụfọdụ, nkịta na-eji obere hernias ebi ndụ ha niile. Onye na-elekọta gị nwere ike iwepu hernias buru ibu mgbe nwa akwụkwọ gị ga-aga ọgwụ, ebe ọ na-ebute ihe egwu ndụ.
Ọrịa Von Willebrand: Ọ bụrụ na ị chọpụta na nwa nkịta gị nwere imi ọbara ma ọ bụ ọbara ọbara na stool ya mana ọ dị mma, ọ nwere ike ịnwe ọrịa Von Willebrand. Ọnọdụ a na-egbochi ọbara ịkpụkọ, na vets nwere ike ịchọpụta ya mgbe nkịta gị nọ n'agbata afọ atọ na ise.
Vets nwere ike ijikwa ya site na iji stit ma ọ bụ mmerụ ọnya, izere ọgwụ ụfọdụ, na ịmịnye ọbara tupu ịwa ahụ.
Ọrịa ọgbụgba Gastroenteritis: Ọ bụrụ na pup gị na mberede amalite ịgba agbọ ma ọ bụ na-arịa afọ ọsịsa nke nwere ọbara, ịkwesịrị ịkpọrọ ya gaa na vet. O nwere ike iwepụ nsogbu ndị ọzọ na-egosi otu ihe ahụ tupu ya achọpụta nchoputa ya. Obi dị m ụtọ na enwere ike ịgwọ ọrịa a ma nwee ike belata n'ime ụbọchị ole na ole.
Otú ọ dị, nkịta gị ga-adị mmiri mmiri iji gbochie nsị intravascular, nke nwere ike ịkpata ọnwụ. Onye na-agwọ ọrịa gị nwekwara ike ịkọwa ọgwụ mgbochi na ọgwụ mgbochi ọnya.
Ikwesiri ime ihe ngwa ngwa ma legide nkịta gị anya ma ọ bụrụ na ị na-enyo nsogbu a.
Cancer: Mgbe anyị nụrụ okwu ahụ cancer, ụbụrụ anyị na-awụlị ọnwụ. N'ụzọ dị mma, ndị na-agwọ ọrịa nwere ike ịgwọ kansa ma ọ bụrụ na ha achọta ya n'oge. Were nwa nkita gi na nlele anya gi na vet iji jide nsogbu obula na mbu. Ọrịa nwere ike ịpụta onwe ya n'ụzọ dị iche iche, yabụ ọgwụgwọ dịkwa iche.
Usoro ọgwụgwọ ahụ nwere ike ịbụ nke ịwa ahụ ma ọ bụ nke ọgwụgwọ, ọnụọgụ mmeri na-adaberekwa na mmadụ.
Ogologo Ndụ nke Airedale Terrier
Ogologo ndụ Airedale Terrier dị n'etiti afọ 10 na 13, nke na-ahụkarị nkịta nke ha hà. N'ezie, nke a dabere na ọnọdụ obibi ha yana ahụike ha niile.
Cheta na nkịta gị nwere ike ịnọ ogologo oge na ilekọta ya bụ nnukwu nkwa.
N'ụzọ dị mwute, ọrịa kansa bụ isi ihe kpatara Airedales ịgafe akwa egwurugwu. Na nyocha sitere na 2001, agadi mere ka 12% nwuru ha na United States .
Na mpempe ọkụ, ọ bụrụ na ị na-ele anya ịzụrụ ma ọ bụ ịnakwere nwa nkita, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị.
Tupu ị kpọta nwa gị n'ụlọ, ịkwesịrị ịkwadebe gburugburu ebe obibi, zụta ihe ụmụaka ji egwuri egwu na akwa, ma chọta vet dị gị nso. Royal Canin akwadebe gị maka ihe ị ga-atụ anya mgbe ị nwetara nwa nkịta ọhụrụ.
Airedale cuties dị site na breeders na ahịa n'etiti $ 1200 na $ 3000, dabere na ha ndabere.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnakwere otu, ọnụahịa dị ala karịa na $ 300 iji kpuchie ụgwọ ụlọ ụlọ. N'ezie, ịzụta nkịta site na onye na-azụ ihe na-enye gị ozi ndị ọzọ gbasara nzụlite ha.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ị gaghị enweta ihe ị na-achọ mgbe ị na-anabata nkịta, ị ga-azọpụta ndụ. Gbalịa ileba anya tupu ịmalite n'aka onye na-azụ ya; ị nwere ike ịchọta onye gị na ya bi n'ụlọ nkụ.
Ndị Areeddale Terrier Breeders
AKC na-enye a ịrịba ndepụta nke ukara edebanyere breeders. Ha na-egosikwa na ụmụ nkịta sitere na ụfọdụ usoro ọbara na ihe ọmụma nke ndị na-azụ ihe. Nwere ike ịlele foto nke nne na nna na ụmụ nkịta site n'oge gara aga.
Mgbe ị na-ahọrọ onye na-azụ ihe, gbaa mbọ mee nyocha gị banyere usoro ọbara na ịrịọ akwụkwọ nnabata. Lee anya na profaịlụ ha ma hụ na edebara aha ha.
Lelee weebụsaịtị ha ma ọ bụrụ na ha nwere otu ma gwa ndị na-azụ ya okwu. Gbalịa izute nne na nna nke a awụba n'oké osimiri tupu ị na-ahọrọ nwa nkita.
Anyị na-akwado ịhọrọ nwa nkịta nwere obi ụtọ ma na-egwuri egwu, nke na-atụghị ụjọ ịbịakwute gị. Ahọpụtala nwa nkịta ihere ma ọ bụ nke na-akpagbu ụmụnne ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ileba anya n'ụfọdụ furballs mara mma dị, nke a bụ ndepụta nke ụfọdụ ndị na-azụ ihe:
Airedale Terriers Na-achọ urelọ Furever
Zọ kachasị mfe iji kwado Airedale bụ ịgafe otu nzukọ ọkachamara na ụdị ahụ.
Adopt-a-Pet.com ga - enwe ike inye gị ọgbakọ dị gị nso nke nwere ike ịnwe Airedales maka ikuchi. Ha nwekwara anụmanụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe nwanne nwanne gị.
Fọdụ n'ime ụlọ ọrụ nnapụta gụnyere:
Agbanyeghi na udiri anumanu ndia yikwara, a Welsh Terrier abụghị Airedale. Lelee ihe atụ ndị a iji gosipụta myirịta na esemokwu ha:
Ọdịdị Ogologo na egwuregwu. Tan na nwa ma ọ bụ akwa grizzle. Uwe oyi. Square udi, nakwa egwuregwu. Tan na nwa ma ọ bụ grizzle wiry kootu.
Ogologo 21-23 ' 13-15 '
Ibu ibu 40-47lbs 15-20lbs
Alitydị mmadụ Na-arụ ọrụ ma nọrọ onwe ha. Nwere ike iso ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-emekọ ihe. Isi ike. Nwekwara ọgụgụ isi na nchebe. Nọ n'ọrụ, nwere ike isiri ike ka gị na anụmanụ ndị ọzọ nwee mmekọrịta. Ọgụgụ isi na nchebe.
Ofbọchị Mbido 1800s Afọ 1700
Ebe Mmalite England Wales
Etiti ọdụ Mba Eeh
Enwere ngwakọta dị iche iche Airedale na ụdị ndị ọzọ. Anyị na-enyocha ụfọdụ n'ime ha n'okpuru:
Izute ndị mara mma ma na-egwu egwu Airedoodle - Isi ihe onyonyo
Airedoodle bụ ngwakọta nke Airedale na Poodle. Ha sitere na United States , na ndị mmadụ zụlitere ha dị ka ndị ibe.
Ha toro ogologo n'etiti 22 na 27 ″ ma tụọ n'etiti 40 na 65lbs. Ha anaghị efufu nke ukwuu dabere na uwe akwa nke ha ketara.
Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na ha Ebe a .
Doglọ Lab’Aire dị nkọ ma chebe ya - Isi ihe onyonyo
Lab’Aires bụ ngwakọta n’etiti Airedale na Labrador Retriever. Amaghi ebe ha si bido dika ndi ohuru.
Ndi mmadu kpebiri inye ha achicha dika ndi enyi na ndi nche. Ogologo ụlọ Lab'Aire dị n'etiti 22 na 24 ″ na ịdị arọ ha n'etiti 50 na 80lbs.
Ha na-enwekarị igbe sara mbara, anya ha dịgasị iche na agba n'etiti hazel, aja aja, na amba. Wagwalking.com na-enye ihe omuma banyere nlekọta ha.
Schnairedale, nkịta na-ahụ n'anya ma na-atọ ọchị - Isi ihe onyonyo
Cuties ndị a bụ ngwakọta n'etiti Schnauzer na Airedale ma nwee ike igwu egwu. Ha toro ruo 22 ″ n’ogologo ma tụọ ihe dị ka 50lbs, ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị dị obere.
Ha na-adịkarị ka schnauzer, nke nwere uhie ma ọ bụ ginger. Ha nwere floppy ntị na-egosi na ha quirky okwu.
Pịa ebe a ịchọta ozi ndị ọzọ na Schnairedale.
Ndị a nkịta nwere ọgụgụ isi -eme ka ọ di uku anụ ụlọ ezinụlọ na nkịta na-eche nche . Ha nweere onwe ha ma nwee ike iji oge dị mkpirikpi jiri ihe egwuregwu ụmụaka na-akpali akpali.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nọ n'ọrụ, ndị Airedale Terrier zuru oke maka gị.
Mgbe a hapụrụ naanị ha ruo ogologo oge, ha nwere ike imebi emebi site n'ịta ata na ịja ụja. Ha nwekwara ike itu ngere ma ọ bụ igwu ala. Ọ bụrụ na ị naghị arụsi ọrụ ike ma ike gwụrụ ngwa ngwa, nkịta a adịghị adabara gị.
Mee ulo nkita di elu: Mee N'onwe Gị Ntuziaka site Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Aha 70 Pug: Pug-Squisite, Pug-Tastic na Pug-Tiful Aha maka Pug.
ọkara German Shepard ọkara anụ ọhịa wolf
ọkpọ oku uhie imi pitbull mix
nkịta nkịta German/labrador retriever mix
German onye ọzụzụ atụrụ osisi wolf ngwakọ